ဘ၀ဇာတ်ခုံ ပန်းမျိုးစုံ: Twitter သုံးနည်းစာအုပ်
Unknown | 11:34 AM | စာအုပ်များ
မြန်မာမှာ နာမည်မကြီးပေမယ့် ကျော်ကြားတယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ တော်တော်လေး သုံးကြတယ်။ ကြားဖူးတာ ကြာပြီ ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်ဘူး။ သူများတွေလဲ ဘာလဲ? ဘာလဲ? ခဏခဏမေးကြတာနဲ့ ရှာလိုက်တာ တွေ့ရောပဲ။ သိထားရင် အရှုံးမရှိတာကြောင့် လိုချင်သူများ ဒီမှာ ယူလိုက်ကြကုန်လော့....။